[Tribune] Amafutha eNtshonalanga Afrika akhuluma isiFulentshi, igolide elimnyama noma "udoti kaDeveli"? - I-YoungAfrica.com - I-Thumela RELAY
Accueil » UMNOTHO [Tribune] Amafutha eNtshonalanga Afrika akhuluma isiFulentshi, igolide elimnyama noma "udoti kaDeveli"? - I-YoungAfrica.com
[Tribune] Amafutha eNtshonalanga Afrika akhuluma isiFulentshi, igolide elimnyama noma "imfucumfucu kaDeveli"? - I-YoungAfrica.com
INiger, Senegal neMauritania zisondele ukuthi zisondele kakhulu emazweni athumela i-hydrocarbon. Kepha ngemuva kokuwa komoya, ubungozi bukhulu.
I-Tribune ihlangene isayinwe ngu-Ousmane Kane, owayenguNgqongqoshe wezeziMali eMelika, kanye no-Amaury de Féligonde, umlingani we-Okan, osebenzisa isu lokubonisana ngezimali anikezelwe e-Afrika.
Ukutholwa okuphambili kwe-hydrocarbon kwenzeke eminyakeni yamuva eNtshonalanga Afrika ekhuluma isiFulentshi. I-turtle mega-gasization yeTurtle, eyabiwe yiSenegal neMauritania, kufanele ikhiqize kusuka kwi-2021 futhi ingalethe iSenegal kwi-10 ephezulu yabakhiqizi base-Afrika. INiger, esekelwa ngabalingani bayo abangamaShayina, ilungiselela ukwethula ipayipi eliholela eBenin ukukhipha uwoyela wayo emazweni aphesheya.
Ezwekazini lapho "imana kawoyela" kuvame ukuba yisiqalekiso ungumthombo wentuthuko esimeme, ngabe lezi zindaba ezinhle zitholile? Nazi izindlela ezingenziwa ukuthi la ma-hydrocarbons abe "igolide elimnyama", akwazi ukuxhasa ngezentuthuko kwezenhlalo nakwezomnotho la mazwe, hhayi lokhu "kudoti kadeveli" (ngamazwi kaJuan Pablo Pérez Alfonzo, umsunguli we-OPEC) , isici senkohliso, izinkinga zemvelo kanye nokuxabana komphakathi.
Qeqesha abasebenzi endaweni yakini
Njengoba kunengcebo yamadoda kuphela, ukutshalwa kwezimali okuyinhloko kweMelika kumele kube ukuqeqeshwa kwabasebenzi kanye nabaphathi, ikakhulukazi labo abasemkhakheni wezezimali. Ngaphandle kwesabelomali, akukho "okuqukethwe kwasendaweni", ngoba ukusetshenziswa kwezinsiza kusebenza zikazwelonke akunqunyelwe: abasebenzi, ukumba kanye nokwakha imisebenzi yezobuchwepheshe, izinduna, ukuhola amaqembu, onjiniyela, abaxhasi bezimali.
Kukule moya lapho kwethulwa khona iNational Institute of Amafutha negesi eSenegal, okuyisinyathelo sokuqala esiqonde ngqo. Ngaphezu kwalokho, amazwe kufanele enze ukuthuthukiswa kwama-SME endawo futhi kuqiniswe izinkampani zikazwelonke ukuze ohlonishwayo bamazwe omhlaba abasebenza kuma-depositi bakwazi, eminyakeni edlule, bakwazi ukudlula kwazi kwabo.
Kuthathe cishe isigamu seminyaka I-Saudi Aramco phatha izinsiza zayo zikazwelonke, ngempumelelo ethile. Kufanele sicabange nangokuthi "i-post-oyili", lo mthombo ungavuselelwa ngokwemvelo. Izwe kumele liphelezelwe ukufaka ikhodi yamafutha enenzuzo nokwandisa irenti. I-Annuity efanelekile, futhi, ukuphatha kahle.
Izingibe ezintathu zilala. Ngakolunye uhlangothi, chitha ngaphandle kokukhathazeka ngekusasa noma izidingo zangempela (ukuxhaswa ngezimali "kwezindlovu ezimhlophe"). Ngakolunye uhlangothi, ukwenza sengathi kuzo zonke izindleko ukudala 'imali engafinyeleleki yezizukulwane ezizayo' (njengaleyo iBhange Lomhlaba 'elibeke' eChad) esimweni lapho 'ikusasa selivele likhona', iningi inani labantu abaneminyaka engaphansi kwe-20. Okokugcina, bekezelela ukubekelwa phansi kwemikhuba yenkohliso yesizwe sonke, esesithombeni amahlazo ahlobene noPetrobras eBrazil.
Phinda uvune kweminye imikhakha
"Isifo saseDashi", esingumthombo wokungalingani okukhulu kwezomnotho nokudalwa kwendwangu ekhiqizayo, kungenye inselelo. Isibonelo saseNigeria uyakhuluma: Umkhiqizi omkhulu wezolimo e-Afrika eminyakeni ye-1960, abe ngumkhiqizi omkhulu wokudla, ukwehluleka ukukhiqiza endaweni. Kubukeka sengathi le ngozi - okungenani esikhathini esifushane - ilahliwe. ISenegal neMauritania zinezindawo zokuhlala ezinesizotha uma ziqhathaniswa namabhishi aseNigeria, Algeria nase-Angola. Wonke umuntu uzodonsa iTurtle, ekugcineni, i-1 billion dollars emalini: umnikelo obalulekile futhi wamukelekile, kepha hhayi uguquko.
Iziphathimandla kufanele zibeke inqubomgomo enamandla yokuvikela imvelo
Noma kunjalo, amazwe kufanele abone isikhathi sangemva kawoyela ngokubutha ingxenye "yemana" emkhakheni wokukhula (ukudoba, ezolimo, ezokuvakasha). Ekugcineni, abaphethe nabasebenza ku-oyela kufanele babeke inqubomgomo evikela imvelo ukuze kugwemeke izingozi ezinobungozi obukhulu (njengokuthi Deepwater Horizon eGulf of Mexico), esimeni esintekenteke sase-Afrika (ukuhlukunyezwa kanye nobuphangi endaweni eyiNiger Delta engcoliswe ukuxhashazwa kukawoyela eningizimu yeNigeria).
Lokhu okutholwe muva nje kulethe ithemba elihle lempilo engcono yabantu. Isibopho esikhulu sikhona nabaholi balawa mazwe: kuzofanele bakhombise amandla abo okuxoxisana nabadumileyo, isimilo esingenakufinyeleleka, nombono wecebo ocacile. Ngabe iSenegal, iMauritania neNiger bazosinqoba "isiqalekiso sezimpahla", njengamamodeli eBotswana, eChile noma eNorway? Ikusasa liyolandisa.
ICongo-Brazzaville: isithangami sendlela enhlobonhlobo phakathi kweChina nezwekazi - JeuneAfrique.com
Nge-Prosus, iNaspers iyaqhubeka nokusebenza kwi-Amsterdam Stock Exchange - JeuneAfrique.com
"Ukubutha abantu esibathandayo etafuleni yinto enhle kakhulu," kusho uJean Imbert ku-RT - VIDEO